Debian Inoburitsa Chikurusa Kuchengetedzwa Kwekuvandudza Mumakore | Linux Vakapindwa muropa
Dare rekuvandudza reDebian rakangozivisa kuwanikwa kweye nyowani yekuchengetedza yekuvandudza yeDebian 8.5, chimwe chezvakanyanya kukosha mumakore. Kune vashandisi veDebian 8.5, zvinokurumidza kugadzirisa kuti uve nesystem yekushandisa pasina chero chekuchengetedza uye nekudaro unodzivirirwa.
Iyi yekuvandudza yekuchengetedza yakaburitswa kuti igadzirise yakakosha njodzi, iyo yaive nechekuita neLinux Kernel yeiyi vhezheni yeDebian. Uku kunetsekana kwakaisa panjodzi kuchengetedzwa kwesimba rakasimba rekushandisa, nekudaro kuita nekukurumidza kwaifanirwa kugadzirisa dambudziko nekukasira.
Kunyanya, kunetseka uku muLinux kernel yeiyi inoshanda system yakabvumira mumwe muchina kuti upinde muTCP / IP protocol. Izvi zvinobvumidza uyo anorwisa kwete kungoona chete zvauri kuita paInternet, asiwo kuisa meseji yakaipa mukati meiyi protocol. Kana iwe uchida rumwe ruzivo nezvenyaya iyi uye uone chirevo chepamutemo, tinya pane iyi link kukwanisa kuzviita.
Iyi yekuvandudza yakaburitswa kugadzirisa kusagadzikana uku uye ku wedzera kusimba kune linux kernel paDebian, chimwe chinhu chicha shandira kudzivirira kuwanikwa kwehunyanzvi hutsva hune hukama ne linux kernel.
Zvirokwazvo zvakanyatsonaka kubva kune vanogadzira Debian, kubvira izvi zvinokuvadza zvine njodzi zvakanyanya uye chinhu chaicho chekuita chinogara chichikurumidza, kuitira kuti vazvigadzirise uye nekukanganisa huwandu hushoma hwevangangodaro vashandisi. Neichi chikonzero, isu tinogara tichikurudzira kuvandudza mashandiro ehurongwa nguva nenguva, kuti tigare takachengeteka kubva pamhando dzedambudziko.
Iyi yekuvandudza ikozvino yave kuwanikwa muDebian repositories Uye zvese zvaunofanirwa kuita kugadzirisa system yekushandisa kune yazvino vhezheni kuti ushandise iyi yekuvandudza uye uve wakachengeteka kubva pakurwiswa uku.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Debian inoburitsa yakanyanya kuchengetedzeka yekuvandudza mumakore
Mumwe mubvunzo Is Linux Mint yakachengeteka? Ini ndinotaura izvi nekuti chete nematanho matatu ekuvandudzwa akaratidzirwa nekumira haagadzirise kernel.
unoreva linux mint debian edition 2? Ini ndakaiisa uye ini handioni chero chekuvandudza ini handizive kana ivo Linux mint vakomana vachigadzirisawo ichi chinhu chechinhu
Uine zvakawanda zvekuzadza uchitaura chinhu chimwe chete uchidzokorora asi zvirinani zvinofarira zvishoma